Sangana neChihuahua, imbwa diki pane dzese | Imbwa dzepasi rose
Chihuahua, imbwa diki kwazvo pasi
Kunyanya kana iwe uchigara mufurati kana mufurati uye urikufunga kuva nemumwe ane makumbo mana shamwari yekugovana naye makore akati wandei ehupenyu hwako, saka hapana chakafanana nekusarudza imbwa diki, senge yakachena kana muchinjikwa chihuahua somuenzaniso.
Uhu furry, kunyangwe aine mukurumbira wekutya uye kuhukura, chidimbu chechingwa chinoda moyo murefu, rudo uye kuremekedzwa kubva kuvanhu vake. Muchokwadi, nedzidzo yakanaka uye nekudzidziswa, hazvizonetsi kuti iwe umunamate iye 😉. Tsvaga.
2 Chihuahua imbwa inobereka sei?
2.1 Ndedzipi mhando dzembwa dzechihuahua dziripo?
3 Maitiro uye / kana hunhu
5 Nzira yekudzidzisa sei Chihuahua puppy?
Chihuahua kana Chihuahueño imbwa iyo inofungidzirwa kuti inobva kune nyika yeMexico yeChihuahua, kunyange iri fungidziro isati yatsigirwa. Kana izvozvo takawana midzi yayo kuMexico, asi hazvizivikanwe kuti zviri kupi chaiko.
Chatinogona kutaura chokwadi ndechekuti zvinyorwa zvekare kwazvo zvinobva kuna techichi, imbwa ine hunhu hwakafanana, kubva muzana ramakore rechiXNUMX, asi zvinokwanisika kuti anga achitogara naMayan. Mumatongo eChichén Itzá (Yucatán peninsula), uye pakati pemapiramidhi eCholula, zvinyorwa zvakawanikwa zvakare.
Chihuahua yatinoziva nhasi idiki zvakanyanya pane yakatangira. Vatsvakurudzi vakaratidza kuti furry inoita zuva redu nhasi yakayambuka nembwa dzekuEurope.
Chihuahua imbwa inobereka sei?
Iyo chihuahua imhuka diki: murume anoyera pakati pe15,2 kusvika 22,9cm pakukwirira paanosvava uye munhukadzi 15,2-20,3cm, kunyange hazvo vamwe vachigona kusvika 30cm. Inorema pakati pe1,5 ne3kg. Unogona kuve nevhudzi refu kana hupfupi, rinogona kunge riine chero ruvara (dema, chokoreti, kirimu, chena, shava…) Iine hupenyu hunotarisirwa hwemakore gumi nemaviri kusvika makumi maviri.
Ndedzipi mhando dzembwa dzechihuahua dziripo?
Kune mhando mbiri:
Apple musoro chihuahua: ndiyo yakajairika. Nzeve dzayo dzakakura uye dzakaparadzaniswa, kazhinji nguva dzose dzakatwasuka. Muviri idiki, uye muswe unotendeukira kumashure.
Deer musoro chihuahua: ndechimwe chinhu chikuru kudarika chemberi. Musoro wacho wakareba, uye une mutumbi wakareba uye mutete.
Maitiro uye / kana hunhu
Imbwa akangwara uye anocherekedza, uyo anoda kutiza nazvo. Asi iyewo akashinga, ane rudo. Iye anofarira kuve pakati pekucherechedzwa, asi chaizvo nekuda kweizvozvo uye nekuti zviri nyore sei kuwira mumasaiti avo, unofanirwa kutanga kumudzidzisa kubva pazuva rekutanga raanouya kumba neruremekedzo uye nemoyo murefu.
Tichifunga kuti imhuka inodya nyama, chinhu chakasikwa kwaari ndechekumupa Barf kana chikafu chakagadzirwa. Asi, kunyangwe iriyo sarudzo yakanakisa, kana ikasaitwa nemazvo inogona kukonzera matambudziko ehutano, saka kana ukafunga kupa chikafu chechisikigo, bvunza chiremba wezvipfuyo. Iye achaongorora yako Chihuahua uye gadzirira yakasarudzika chikafu kune shamwari yako.
Kunyangwe zvakadaro, kana iwe usiri kuda kuomesa zvakanyanya, unogona kugara uchipa Yum Diet (zvingave zvakafanana naBarf, asi nemidziyo yakatemwa uye yakavhenganiswa), kana kufura usina zviyo.
Bvudzi remukomana mudiki uyu rinogona kupfupika kana kureba, chero zvakadaro, unofanirwa kukama kamwe chete mazuva ese ehupenyu. Paunoona kuti inowira kunze kazhinji, sezvazvinoitika mumwaka wekunyungudika (chitubu), pfuura muzinga kaviri pazuva. Izvi zvinomubatsira kuti atonhorere, uye haufanire kuchenesa zvakanyanya.
Zvisinei nehukuru hwayo, imbwa ine simba rakakwirira. Neichi chikonzero, haisi mhuka iyo iwe yaunogona kugara wakabata mumaoko ako kana mukati memadziro mana. Kuti, chipfuure mazuva ese, kanokwana kamwe, asi zvinokurudzirwa kuve vatatu kana kupfuura.
Ukapedza nguva yakareba usingaite chinhu, unofinhwa. Uye kana akaboora, anozove nehunhu husingadiwe, sekuhukura zvakanyanya kana kutsenga pazvinhu.
Icho chizvarwa icho ane hutano hwakanaka. Ehe, iwe unofanirwa kuitora kuti utore ese anodiwa majekiseni, pamwe neiyo microchip. Uye kana iwe usiri kuda kuti iwedzere, bvunza vet yako kuti ndeapi sarudzo aunazvo.
Nzira yekudzidzisa sei Chihuahua puppy?
Nguva dzose nemwoyo murefu, rudo uye kuremekedza. Hapana chimwe chezvinhu zvitatu chingashayikwa. Ichokwadi kuti maChihuahua anogona kunge akasindimara (akasindimara), uye dzimwe nguva asingadzoreki, asi iwe unogona kumisikidza miganho nenzira yakanaka pasina kushevedzera kana kurova (nenzira, yeuka kuti kushungurudza mhuka imhosva munyika zhinji, se muSpain).
Anofanirwa kuve nezvaanogara achiita mazuva ese, uye iwe unofanirwa kuve uri mazviri. Saka mudzidzise zvinyowani zvekutanga, senge "gara" kana "huya", edza kuita maekisesaizi uye kunakidzwa, uyezve kumba uchaona kuti akadzikama.
Yakachena chihuahua puppy inodhura nezve mazana matatu euros, asi kana iwe usina hanya zvakanyanya nezve kuchena kwerudzi, unogona kushanyira pekugara kana mhuka inodzivirira, nekuti kazhinji kune vaChihuahuas vari kutsvaga mhuri inovada.
Kana iwe uchida kunakidzwa nemimwe mifananidzo yeChihuahua, heano mamwe:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Chihuahua, imbwa diki kwazvo pasi
Dumbu kurwadziwa nembwa
Kenani Imbwa, muchengeti akanakisa